दोस्रो अध्यक्ष दिन ओली तयार, किन मानेनन् माधव नेपाल ? - सुनाखरी न्युज
दोस्रो अध्यक्ष दिन ओली तयार, किन मानेनन् माधव नेपाल ?
Posted on: July 22, 2021 - 6:46 am
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दोस्रो अध्यक्ष बनाउन आफू तयार हुँदा पनि वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल सहमतिमा नआएको बताएका छन् । पार्टी एकताका लागि आफू हदैसम्म लचिलो भएको बताए । पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बुधबार बसेको बैठकलाई सम्बोधन गरेका ओलीले भने अन्तिमसम्म पनि एकताका लागि प्रयास जारी छ ।
२८ असारमा सर्वोच्चले संसद पुनर्स्थापना मात्र गरेन, एमालेका २३सहित १४९ सांसदको समर्थन जुटाएका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दियो । ३ साउनमा नेता नेपालसहित एमालेका २२ सांसदले फ्लोर क्रस गरेर देउवालाई विश्वासको मत दिए ।
साथै दोस्रो अध्यक्ष दिने प्रस्तावमा अध्यक्ष ओली टिकिरहने हो भने छलफल हुन सक्ने नेपाल समूहका नेताहरुले बताएका छन् ।